Obu Bobona Bomi Bumnandi
Yintoni onokuyenza ukuze usondele kuThixo? Siye saxubusha ngezinto onokuzenza ukuze ube nobuhlobo kunye noThixo. Zezi zilandelayo
Lazi uze ulisebenzise igama likaThixo, uYehova
Thetha kunye naye rhoqo ngomthandazo nangokufunda iLizwi lakhe, iBhayibhile
Qhubeka usenza oko kumkholisayo uYehova
Sondela kuThixo ngokusebenzisa igama lakhe, ngokuthandaza kuye, ngokufunda iLizwi lakhe nangokwenza oko kumkholisayo
Xa ucinga ngezi zinto, ngaba unokuthi wenza oko kufunekayo ukuze usondele kuThixo? Zikho izinto ocinga ukuba unokuphucula kuzo? Kakade ke, kufuneka umgudu, kodwa khawucinge ngemiphumo onokuyifumana.
UJennifer, waseUnited States uthi: “Nawuphi na umgudu owenzayo ukuze ube nobuhlobo kunye noThixo ubalulekile. Obu buhlobo buzisa iintsikelelo ezininzi: umthemba ngakumbi uThixo, ubuqonda ngakumbi ubuntu bakhe, kodwa okona kubalulekileyo, ufumana uthando olungakumbi. Obu bobona bomi bumnandi!”
Ukuba ungathanda ukuba nobuhlobo obusondeleyo noThixo, amaNgqina kaYehova angakuvuyela ukukunceda. Anokufunda iBhayibhile kunye nawe, simahla. Wamkelekile ukuya nakwiintlanganiso zawo ekufundiswa kuzo iBhayibhile kwiHolo YoBukumkani ekufuphi, apho uya konwabela ukuba kunye nabantu ababuxabisayo ubuhlobo babo noThixo. * Njengoko usenza oko, nawe uya kuba njengomdumisi owathi: “Ke mna, ukusondela kuThixo kulungile kum.”—INdumiso 73:28.
^ isiqe. 9 Ukuze ucele isifundo seBhayibhile okanye ufumane iHolo YoBukumkani ekufuphi kuwe, nceda uthethe nomntu okunike le magazini okanye uye kwiWebhsayithi yethu ethi, www.jw.org/xh. Jonga phantsi kwendawo ethi SIFOWUNELE OKANYE USIBHALELE kumazantsi ephapha.
Text Iimpapasho onokuzikhuphela IMBONISELO Disemba 2014 | Unako Ukusondela KuThixo